Maraykan oo dilay sargaal ka tirsan IRAN faahfaahin – Somali Mail
Home WARARKA Somali News Maraykan oo dilay sargaal ka tirsan IRAN faahfaahin
Maraykan oo dilay sargaal ka tirsan IRAN faahfaahin
Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku xaqiijisay in Jeneral Qassem Soleimani lagu dilay weerar dhacay goor dambe oo khamiistii ah kadib amar kasoo baxay madaxweyne Donald Trump.
Waxay weerarka ku qeexday “tallaabo lagu difaacayey danaha Mareykanka ee dibedda.”
“Jeneral Soleimani wuxuu waday qorshe lagu weerarayo diblomaasiyiinta iyo ciidamada Mareykanka ee Iraq iyo gobolka” ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay Pentagon-ka.
Qoraalka ayaa intaas ku daray “Duqeyntan waxaa looga dan lahaa in lagu joojiyo weerarka Iran ay qorsheyneysay. Dowladda Mareykanka waxay sii wadi doontaa inay qaaddo dhammaan tallaabooyinka muhiimka ah oo ay ku ilaalineyso dadkeeda iyo danaheeda.”
Wasaaradda difaaca Mareykanka ma aysan bixin faah-faahin ku saabsan duqeynta, hase yeeshee saraakiisha Iraq ayaa sheegay in gantaal lagu weeraray kolonyo baabuur ah oo ku safrayey agagaarka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Baghdad.
Weerarka ayaa waxaa sidoo kale ku dhintay Abu Mahdi al-Muhandis oo ahaa taliye ku-xigeenka maleeshiyada Iran ay taageerto ee al-Xashd al-Shacbi ee dalka Iraq.
Previous article Masjidka Towfiiq Caasimadda Norway Oslo oo heshiis laga gaaray
Next article War-Saxaafadeed Madaxwayne Trump oo ka hadlay dilki sargaalki Iran sulaymani